Arsivan'ny Audiobook - fototra afrikhepri
Fifandraisana SOKAJY AUDIO BOOK
Saron-tava fotsy hoditra mainty - Frantz Fanon (Audio)
Raha vantany vao vita ny déolonisation, io fiezahana hahatakatra ny fifandraisana Mainty-Fotsy io dia mitazona ny lanin'ny faminaniana rehetra: Satria ny fanavakavaham-bolon-koditra, na eo aza ny horohoro nampijaly azy teo amin'izao tontolo izao, dia mitoetra ...
The Dhammapada - Ny andininy ao amin'ny Buddha (Audio)
Heverina ho hazon'ireo soratra kanonika an'ny Buddhism, ny Dhammapada dia iray amin'ireo lahatsoratra malaza indrindra, noho ny fahafahany maneho ny votoatin'ny eritreritra bodista ambanin'ny ...
Fisaintsainana feno saina - Christophe André (Audio)
Ny misaintsaina dia tsy ny manapaka ny tenanao amin'izao tontolo izao, fa ny mifanohitra amin'izay kosa ny fanatonana azy mba hahatakarana azy, tiavo sy manova azy. Fitaovana iray ihany koa io, azon'ny rehetra idirana, an'ny ...
Sitrano ny saina, sitrano ny vatana (Audio)
Ny fanovana tsara ny eritreritsika dia saika mitarika ho amin'ny vanim-potoana feno, fahasalamana tsara kokoa, fanatanterahana ny faniriantsika sy nofinofintsika. Natao tamin'ny ...
Mialà amin'ny olana - Eckhart Tollé (Audio)
Eckhart Tolle dia manolotra boky vaovao ho an'ny mpamaky izay hijereny amin'ny fomba marina ny fanjakan'ny olombelona ankehitriny. Miangavy antsika izy hanamarika sy hanaiky fa ity fanjakana ity, ...
Vola sy ny lalàn'ny fisarihana: Ahoana ny fomba hisarihana harena, fahasalamana ary fahasambarana (Audio)
Ato amin'ity boky ity dia asehon'i Esther sy Jerry Hicks aminao ny fomba fampiharana ny Lalànan'ny Fahasarotana. Ho fantatrao fa izay rehetra mitranga amin'ny fiainanao, ...
Tsy maintsy vakiana izany ho an'izay te hanatsara ny fiainany, ny teny hoe "harena" dia matetika ampiasaina hilazana tombony ara-toekarena na entana ara-nofo. Na izany aza, mampiseho an'i Napoleon Hill amin'ity ...
Azonao atao ny manasitrana ny fonao - Louise Hay & David Kessler (Audio)
Louise sy David dia miresaka momba ny fihetseham-po sy ny eritreritra tonga ao aminao rehefa vaky ny fonao taorian'ny fisarahana, rehefa tapitra ny fisaraham-panambadiana ...
Fanapahan-kevitra: Ahoana no fikirizana rehefa vonona ny hiala (Audio)
Asehon'ny fikarohana fa ny finiavana dia vinavina tsara mialoha ho an'ny fahombiazana noho ny antony hafa. Ny fahaizana maharitra na eo aza ny fihemorana dia zava-dehibe kokoa ...
Ny tsiambaratelo mahatalanjona an'ny Amerikanina manankarena - Thomas J. Stanley (Audio)
Ny fiainana miroborobo ara-bola dia tsy anjakan'ny ambony. Ity audiobook ity dia maneho fa ny ankamaroan'ny olona an'arivony tapitrisa dia olon-tsotra. Toa anao ! Mpanapitrisa tsy tonga ...
Fanehoan-kevitra momba ny fiainana - Jiddu Krishnamurti (Audio)
Nandritra ny androm-piainany, i Krishnamurti dia nandà ny hevitra, ny fivavahana, ny foto-pinoana ary ny mari-pana amin'ny endriny rehetra. Ho azy, tena fahalalana ny tenany ...
Ny dikan'ny fahasambarana - Krishnamurti (Audio)
Ny fampianaran'i Krishnamurti dia mifototra amin'ny faharesen-dahatra fa ny fanovana ny fiarahamonina dia aorian'ny fanovana olona iray. Fanakianana ny fivavahana sy ny sekta, ...
Resadresaka nifanaovana tamin'Andriamanitra - Neale Donald Walsch (Audio)
Folo taona lasa izay dia niseho tao amin'ny fivarotamboky ny boky 1 amin'ny Resadresaka nifanaovana tamin'Andriamanitra. Namidy haingana amina hetsy aman-jatony, nijanona ho 137 ... io fisehoan'ny famoahana io ...
Page 1 ny 19 1 2 ... 19 manaraka